ပင်လယ်ကျွန်းစုဒေသတွေကတင်သွင်းတဲ့ ရှားပါးပင်လယ်စာအစုံကို တစ်နေရာတည်းမှာရရှိနိုင်မယ့်…… – FoodiesNavi
ပင်လယ်စာအသည်းစွဲတွေအတွက် ? ? နေ့စဉ်အလွယ်တကူရရှိနိုင်တဲ့ပင်လယ်စာမျိုးစုံကို ? ? ? အလွယ်တကူစားသုံးနိုင်ပေမယ့် ရေအောက်နက်နက်မှာ ခက်ခက်ခဲခဲရှာဖွေရတဲ့ ? ? ? ပင်လယ်စာတွေကိုတော့ စားသုံးနိုင်ဖို့အလွန်ခဲယဉ်းလှပါတယ်။ ? ? ဒါကြောင့်ပင်လယ်စာချစ်သူတွေအတွက် Foodies Navi ကနေ ပင်လယ်ကျွန်းစုဒေသတွေကတင်သွင်းတဲ့ ? ? ? ? ပင်လယ်စာအစုံကို တစ်နေရာတည်းမှာသွားရောက်သုံးဆောင်နိုင်စေဖို့အတွက် ? ? Siberia Seafood Restaurant လေးအကြောင်းကိုလမ်းညွှန်ပေးချင်ပါတယ်။ ?? ?? ဒီဆိုင်လေးရဲ့လိပ်စာကတော့– အမှတ်(၉၇၃) ၊ ရတနာလမ်းမကြီး ၊ ၁၂/ရပ်ကွက် ၊ ၁၄/၁၅လမ်းဆုံအနီး ၊ KIA Car Showroom ရှေ့ ၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ ? ?
Siberia ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ ? ? ? ? ပင်လယ်စာအစားအစာမျိုးစုံကို ခင်းကျင်းပြသထားပြီး စားသုံးသူတွေကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အစားအစာနဲ့ ? ? အတူသုံးဆောင်လိုတဲ့အရသာအတိုင်း စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်မှုတွေကို ? ? စားဖိုမှူးကြီးတွေကစိတ်တိုင်းကျချက်ပြုတ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ??‍? ??‍? Siberia မှာနာမည်အကြီးဆုံးနဲ့လူကြိုက်အများဆုံးကတော့ ခွဲဖွင့်လိုက်တာနဲ့ ဖြူဖွေးပြီးနူးညံ့တဲ့အသားအပြည့်ပါဝင်တာကို အားပါးတရတွေ့မြင်နိုင်မယ့်စားချင်စဖွယ် ? ? Spanner Crab ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသားများသလို ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်လေးလဲဖြစ်တာကြောင့် ဂဏန်းရဲ့လတ်ဆတ်တဲ့အရသာကို အပြည့်အဝခံစားစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ? ? လတ်ဆတ်တဲ့ပင်လယ်စာအစုံနဲ့ ? ? ? ? ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို ရောပြွမ်းထားပြီးထိမိတဲ့အရသာတွေဖော်စပ်ထားတဲ့ ? ? ပင်လယ်စာဟော့ပေါ့ကိုလည်း တဝကြီးသုံးဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ? ?
? ? ? ? ဂုံးယောက်မ ၊ ငါးလင်ဗန်း ၊ ပုဇွန်ကျား ၊ ကယုကမာ ၊ သွေးဂုံး ၊ ဥပြည့်ဂဏန်း ၊ ငါးရှဉ့် ၊ ကကတစ် ၊ ငါးဝက် ၊ ကဘလူး ၊ ကျောက်ငါး(ငတောက်တူ)စတဲ့ရှားပါးပင်လယ်စာတွေအပြင် ? ? တောင်ဝက်သား ၊ တောကြောင်သားတွေကိုလည်း လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ? ? ဆိုင်ကိုသွားရောက်မသုံးဆောင်ချင်ဘဲ ?‍♀️ ?‍♀️ အိမ်မှာပဲပင်လယ်စာအစိမ်းတွေကို ? ? ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်စားသောက်လိုသူတွေအတွက်လည်း အိမ်အရောက် Delivery Service တွေရှိတယ်ဆိုတော့ ? ? ပင်လယ်စာကိုခုံမင်နှစ်သက်သူတွေအတွက် လုံးဝကွက်တိပဲနော်။ ?? ?? ဆိုင်ဖွင့်ချိန်ကတော့ ⏰ ⏰ မနက်(၁၀)နာရီကနေ ည(၁၁)နာရီခွဲအထိပဲဖြစ်ပါတယ်။
Image Source : www.facebook.com/siberiaseafoodrestaurant